Hulu vs Sling TV - Adeeggee Daaqadkee Ugu Fiican? - Kuuboonada
Hulu vs Sling TV - Adeeggee Daaqadkee Ugu Fiican?
Xadhig jarista ayaa dhaqan cusub u noqonaysa dadka adduunka. Erayada fudud, wax walba waa ka wareejinta Cable ama Satellite TV barnaamijyada soo dejinta ee caanka ah. Barnaamijyadan qulqulka leh ayaa adeegsada internetka si ay kuugu keenaan madadaalo aan kala go 'lahayn. Inta badan barnaamijyadan waxay leeyihiin ikhtiyaar fiidiyoow ah.
Si kastaba ha noqotee, kuwan barnaamijyada qulqulka ha u dhigmin rafcaanka saxda ah ee Live TV. Iyadoo aan loo eegin sida aad u egtahay, dadka qaarkiis waxay tebayaan kala sooc la'aanta Live TV iyo faracyo badan oo kanaalo ah. Dadka aan go'aan ka gaari karin waxa ay daawan doonaan ama raadinayaan madadaalada asalka ah, Live TV waa habka ugu wanaagsan ee madadaalada.
Muuqaalkan, weli waxaa jira laba koox oo waaweyn oo isku xidhaya geesaha midba midka kale. Waa sax! Hulu iyo Sling TV waa laba aag oo caan ah oo aad kuheli karto khibrad TV toos ah. Dib-u-eegidgan, waxaan isbarbar dhigi doonnaa Hulu iyo Sling TV.
Hulu vs Sling TV - Iswaafajin
Isku waafaqsanaanta barxad waxay la xiriirtaa qalabka ay ka heli karaan. Labada Sling TV iyo Hulu labaduba waa barnaamijyada ugu horreeya ee laga heli karo macruufka, Android, iyo nidaamyada kale ee hawlgalka. TV kasta oo Smart ah ayaa soo dejisan kara oo kuu bilaabi kara adiga.
Xitaa Roku, Firestick, iyo bixiyeyaasha adeegga qulqulka kale ayaa kuu keenaya xilliyada firaaqada adeegsiga barnaamijyadan. Intaas waxaa sii dheer, waxaad u isticmaali kartaa qalabka ciyaarta, sidoo kale. Hulu waxay leedahay helitaan wanaagsan oo ku saabsan qalabka ciyaarta maadama laga heli karo Nintendo Switch. Sling TV ma laga heli karo barxadda Sony, sidoo kale. Dhanka kale, Hulu way fiicantahay oo waxay kuu keeneysaa Hulu + Live TV oo loogu talagalay barnaamijka Sony.
Guud ahaan, waxaad haysataa nooc kafiican oo iswaafaqsan Hulu marka loo eego Sling TV. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo inta aaladaha inta badan la isticmaalo ay khuseeyaan, Sling TV wali wuxuu taagan yahay meel lagu shaqeyn karo.
50 Filim oo ugufiican oo laga daawado Netflix
In kasta oo ay kuxirantahay nooca rukumashada aad hesho, tirada shaashadaha waa nooc iswaafajin ah. Waxaa muhiim ah in la barto inta go'aan ee aad isku mar u wada isticmaali karto si aad ugala socoto barnaamijka. Diiwaangelinta Orange ee Sling TV waxay u oggolaaneysaa qulqulka hal shaashad, iyo xirmada macaamiisha ee Blue waxay u oggolaaneysaa illaa saddex shaashad. Dhanka kale, Hulu waxay u oggolaaneysaa qulqulka laba qalab isku mar xirmo kasta.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira addon dheeri ah oo ah qalab aan xadidnayn. Waxay awood kuu siin doontaa inaad ku socod Hulu seddex aaladood oo mobilo ah iyo qalabka guryaha aan xadidneyn. Mar labaad, waxaad Hulu u tahay guuleyste cad oo leh dabacsanaanta xirmada Add-on.
Hulu vs Sling TV - Tilmaamo Muhiim ah
Ujeeddada dhan ee barnaamijyadan qulqulka leh ayaa ah inay kuu soo bandhigaan waxyaabo madadaalo leh. Runtii waxay noqotay mid aad u wareer badan in la go'aansado barnaamijka uu soo bandhigo nooca nuxurka ah. Waxaad arki kartaa dallacsiinno iyo xayeysiisyo aad u tiro badan. Si kastaba ha noqotee, Hulu iyo Sling waxay u muuqdaan inay daboolayaan muuqaal ballaadhan.
TV toos ah
Aynu ku bilowno tixgelinta khibradda tooska ah ee TV-ga Live. Hulu + Live TV waa xirmo rukumo ah oo kuu keenaya noocyo kala duwan oo toos ah kanaallada Live TV. Waxay la shaqeysay shabakado badan oo waaweyn sida NBC, CBS, ABC, Fox, iyo shabakado telefishan oo kale. Sidaa darteed, waxay bixisaa saf soo jiidasho leh oo loogu talagalay kanaallada TV-ga. Intaas waxaa sii dheer, waxaad haysataa addons dheeri ah oo loogu talagalay Disney +, ESPN +, HBO, iyo Starz si aad u sii ballaadhiso waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Sling TV wuxuu kuu keenayaa TV-yada LIVE TV ee laga yaabo inaysan ku jirin qaar ka mid ah kanaalada caanka ah, laakiin aruurintu waa macquul macquul ah. Waxay leedahay Shabakad Cartoon, CNN, FOX, AMC, Comedy Central, iyo warbaahin kale oo ku soo kordhay caan marka la barbar dhigo kanaalada Hulu ee mudnaanta leh.
Markaa halka Hulu ay ku guuleysan karto wareeggan iyada oo dhowr safkeeda qasab ah, Sling TV wuxuu kuu keenayaa xulasho ka raqiisan oo xiiso leh kanaallo. Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad ku darto ama ka saarto kanaallada oo aad si gaar ah ugu qorto, in ka badan Hulu. Marka, Sling wuxuu hayaa dabacsanaan waaxeed.
Waxay noqon kartaa qodob xusid mudan in Hulu uusan bixin jadwalka tooska ah ee TV-ga ee caadiga ah ee telefishanka dayax gacmeedka iyo barnaamijyo kale oo badan oo LIVE TV ah. Dhanka kale, Sling wuxuu kuu keenayaa jadwalka TV-ga si aad si fudud ugu calaamadeyso barnaamijka una diyaariso iyaga kahor.
Hase yeeshe, inkasta oo dagaalka Channel-ka, Hulu laga yaabo inuu guuleysto. Ilaa aad tixgeliso qiimaha rukunka. Hulu + Live TV waa hal rukun oo kuu keenaya ikhtiyaarka Live TV. Aad ayey uga qaalisan tahay rukunka Sling TV.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad weli heleysaa xayeysiisyo iyo xayeysiin aan ka jirin Sling TV. Marka haddii aadan tixgelin tayada safka ee qiimaha, Sling TV ayaa si fudud ugu guuleysta wareeggan.
Hulu iyo Sling TV labaduba waxay kuu keenayaan DVR daruur ku saleysan si aad uqorto kan aad jeceshahay Bandhigyada TV-ga iyo filimada la daawado iyaga. Intaas waxaa sii dheer, Sling TV iyo Hulu ayaa kuu keenaya fiidiyoow dalab ah. Si kastaba ha noqotee, helitaanka Hulu iyo safka ayaa aad uga xiiso badan Sling TV.
Sababtoo ah SlingTV waxay ugu horeyn diirada saareysaa inay ku siiso khibrad Live TV ah. Dhanka kale, Hulu waxay u shaqeysaa sidii barnaamij fidin toos ah oo toos ah oo internetka ah oo ay kujiraan waxyaabo badan oo dalab ah. Qeybtaan, Hulu ayaa ku guuleysan doonta waqti kasta oo la siiyo.
Dib-u-eegiddani waxay ku salaysnayd tayada nuxurka, safka, madadaalada, iyo sahlanaanta isticmaalka. Ma aysan tixgelin qarashka rukunka ama astaamaha kale ee la midka ah. Waxaa jira tixraac, laakiin go'aanka wuxuu ku saleysnaa guud ahaan qaybta madadaalada. Sidaa awgeed, Hulu ayaa ka guuleysan doonta Sling TV.
Si kastaba ha noqotee, haddii tani tixgelin karto dabacsanaanta xulashada kanaallada iyo rukhsad badan oo 'la awoodi karo', markaa Sling TV wuxuu awoodi doonaa inuu si xoog leh u qabsado dhulkiisa. Haddii aad tixgeliso waayo-aragnimada TV-ga tooska ah ee tooska ah, Sling TV wuxuu si hufan u bixiyaa muuqaalkan. Si kastaba ha noqotee, Hulu waxay maamushaa inay yeelato uruurinta guud ee shabakadaha iyo kanaalada TV-ga.
Marka la eego isdhexgalka iyo sahlanaanta isticmaalka, Telefishinka Sling TV weli waxaa heysta wado dheer oo uu maro. Dabcan, Hulu waxay maamushaa inay ilaaliso racfaanka sare. Dhanka kale, Sling TV wuxuu dareemayaa mid toos ah, mid yar, iyo xitaa mid jaban, sida barnaamijyada kale ee socodka lacag la'aanta ah ee laga heli karo suuqa.
Si aad ugu dhigto ereyo fudud. Haddii aadan dhib ka qabin qiimaha oo aad rabto madadaalo tayo sare leh, markaa Hulu waa habka adiga kugu habboon. Hulu waxay bixisaa dalabyo kala duwan oo la yaab leh, gunooyin, qiimo dhimis, iyo waxyaabo kale oo badan.
Si kastaba ha noqotee, beddelaad miisaaniyadeed oo dheellitiran oo leh nidaam toosan oo ah kanaallo iyo xitaa adeegyo 'bilaash ah', Sling TV ayaa ka fiicnaan lahaa, gaar ahaan haddii aad ku lammaaneyso barnaamijyada kale ee socodka.
Isbarbardhiga Kale ee Aad Moodo Sida:
Sam & Max: Markan waxay u tahay madaxa PSVR usbuuca soo socda!
qofka ugu awooda badan dunida
mareegaha wanaagsan ee daawashada bandhigyada tv -ga
caawi netflix com aip 701
maxay netflix -gaagu uusan u shuban doonin
goobo si aad u daawato filimada cusub oo lacag la’aan ah
google home app ka mac